ILevemir vs. Lantus: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Septhemba 2021
Izidakamizwa Vs. Umngani Ezemidlalo Ezisindayo Izindaba Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Inkampani Imidlalo Izindaba, Wellness Inkampani, The Checkout Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa Ukuphuma Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani, Imfundo Yezempilo Izilwane Ezifuywayo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> ILevemir vs. Lantus: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
ILevemir vs. Lantus: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I- Umbiko Kazwelonke Wezibalo Sikashukela Ka-2020 ithi abantu abangu-10.5% e-U.S. banesifo sikashukela, kanti isibalo siyakhula ngeminyaka. Cishe ama-27% abantu abaneminyaka engama-65 nangaphezulu banesifo sikashukela. Uma wena noma othandekayo unesifo sikashukela, kungenzeka ukuthi uke wezwa ngezinhlobo ezahlukahlukene zama-insulins.
ILevemir neLantus yimithi yomuthi ene-insulin emibili esetshenziswa ekwelapheni isifo sikashukela kubantu abadala nasezinganeni. Zombili lezi zidakamizwa zivunyelwe yi-United States Food and Drug Administration (FDA). UNovo Nordisk wenza iLevemir, kanti uSanofi wenza iLantus. Zombili zihlukaniswa njengama-insulins asebenza isikhathi eside. Yize uLevemir noLantus bobabili bengama-insulins asebenza isikhathi eside, banokuhluka okuthile, esizokuchaza ngezansi.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kweLevemir neLantus?
ILevemir neLantus bobabili imijovo ye-insulin esebenza isikhathi eside. Zombili zitholakala ngegama lomkhiqizo kuphela, njenge-vial ye-10 ml noma umjovo wepeni.
ILevemir iqukethe i-insulin detemir futhi ijovwa kanye nsuku zonke (ngesidlo sakusihlwa noma ngesikhathi sokulala), noma kabili ngosuku.
ILantus iqukethe i-insulin glargine futhi ijovwa njengomthamo owodwa wansuku zonke ngasikhathi sinye usuku ngalunye.
Umehluko omkhulu phakathi kweLevemir neLantus
Isigaba sezidakamizwa I-insulin esebenza isikhathi eside I-insulin esebenza isikhathi eside
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile Umkhiqizo Umkhiqizo
Ngubani igama elijwayelekile? Isifo se-insulin I-insulini glargine
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Ukujova (ipeni ne-Levemir Flextouch pen) Umjovo (ipeni ne-Lantus Solostar pen)
Uyini umthamo ojwayelekile? Iyahluka ngokuya ngezidingo ze-metabolic, imiphumela yokuqapha i-glucose yegazi, kanye nenhloso yokulawula i-glycemic. Ukujova ngomgogodla (ngaphansi kwesikhumba) kanye nsuku zonke ngesidlo sakusihlwa noma ngesikhathi sokulala, noma kabili ngosuku Iyahluka ngokuya ngezidingo ze-metabolic, imiphumela yokuqapha i-glucose yegazi, kanye nenhloso yokulawula i-glycemic. Ukujova ngomgogodla (ngaphansi kwesikhumba) kanye nsuku zonke ngasikhathi sinye nsuku zonke
Yelashwa isikhathi esingakanani? Isikhati eside Isikhati eside
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Abantu abadala nezingane Abantu abadala nezingane
Izimo eziphathwe yiLevemir neLantus
ILevemir neLantus kusetshenziselwa ukuthuthukisa ukulawula ushukela egazini kubantu abadala (ngohlobo 1 noma Uhlobo 2 sikashukela mellitus) nezingane (ezine-Type 1 diabetes). ILevemir neLantus zaziwa nangokuthi i-basal insulin. I-insulin eyisisekelo igcina izinga likashukela egazini lakho lingaguquguquki ngenkathi uzila ukudla, njengalapho ulele.
ILevemir neLantus akufanele zisetshenziselwe ukwelapha i-ketoacidosis yesifo sikashukela.
Isimo Levemir I-Lantus
Ithuthukisa ukulawulwa kwe-glycemic kubantu abadala nasezinganeni ezinesifo sikashukela Yebo Yebo
Ingabe i-Levemir noma iLantus isebenza kangcono?
Isifundo esisodwa ikhombise ukuthi iziguli zingadinga umthamo ophakeme weLevemir ukufeza ukulawula i-glucose yegazi. Ezinye iziguli zidinga umthamo wesibili weLevemir uma imiphumela iphela ngemuva kwamahora angaba ngu-12. ILantus ivame ukuhlala isikhathi eside kuneLevemir. Le datha ayikhombisi ukuthi eyodwa iphumelela kakhulu kunenye, kepha isitshela okuningi ngokulinganisa kanye nobude besenzo.
TO ukubuyekezwa kwezifundo uphethe ngokuthi uLevemir noLantus bayefana ngokuphepha nokusebenza ngempumelelo. Ukukhetha nokubekezelela kwesineke kunquma ukukhethwa komkhiqizo ohamba phambili.
i-humalog ne-novolog into efanayo
Isidakamizwa esingcono kakhulu kuwe singanqunywa kuphela ngumhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo, ongacabangela izimo zakho zezokwelapha nomlando kanye nanoma imiphi imithi oyiphuzayo engasebenzisana neLevemir noma iLantus.
isikhathi esingakanani after will plan b work
Ukuhlanganiswa kanye nokuqhathaniswa kwezindleko kweLevemir vs. Lantus
ILevemir neLantus zivame ukumbozwa ngumshuwalense, kepha hhayi iMedicare Part D. Kodwa-ke, njengoba izinhlelo zingahluka, hlola ngohlelo lwakho ukuthola eminye imininingwane.
Ibhokisi lamapeni eLevemir izindleko cishe $ 560 ephaketheni. Ungasebenzisa ikhadi lamahhala le-SingleCare ukwehlisa intengo ibe ngaphansi kwama- $ 370.
Ibhokisi lamapeni eLantus libiza cishe u- $ 510 ephaketheni. Ikhadi lamahhala le-SingleCare lingehlisa inani libe ngaphansi kwama- $ 305.
Imbozwe ngokujwayelekile yi-Medicare Part D? Akunjalo Akunjalo
Umthamo ojwayelekile Ibhokisi eli-1 Ibhokisi eli-1
I-Medicare copay ejwayelekile $ 532 $ 489
Izindleko ze-SingleCare $ 367 + $ 304 +
Imiphumela emibi ejwayelekile yeLevemir vs. Lantus
Umphumela ovame kakhulu we-Levemir ne-Lantus yi-hypoglycemia (ushukela ophansi wegazi). Imvamisa iyahluka ngokuya ngezici zesiguli ngasinye.
Eminye imiphumela emibi ejwayelekile yeLevemir ifaka ukutheleleka okuphezulu komgudu wokuphefumula, ikhanda elibuhlungu, umphimbo obuhlungu, umkhuhlane, izinhlungu emuva, i-peripheral edema (ukuvuvukala engalweni noma emlenzeni), nokukhwehlela.
Eminye imiphumela emibi ejwayelekile yeLantus ukutheleleka okuphezulu okuphefumulayo, ikhanda, izinkinga zamehlo, ukuvuvukala kwezingalo nemilenze, umfutho wegazi ophakeme nobuhlungu.
Imiphumela emibi engeziwe ingenzeka. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuthola iseluleko sezokwelapha mayelana nemiphumela engemihle.
I-Hypoglycemia Yebo Iyahlukahluka Yebo Iyahlukahluka
Ukutheleleka okuphezulu okuphefumulayo Yebo 26.1% Yebo 22.4%
Ubuhlungu bekhanda Yebo 22.6% Yebo 5.5%
I-edema yomngcele Yebo Iyahlukahluka Yebo amashumi amabili%
Umphimbo obuhlungu Yebo 9.5% Yebo 7.5%
Umfutho wegazi ophezulu Akunjalo - Yebo 19.6%
Ukuphazamiseka kwemithambo yegazi Akunjalo - Yebo 5.8%
I-cataract Akunjalo - Yebo 18.1%
Ukulimala ngengozi Akunjalo - Yebo 5.7%
Ubuhlungu besisu Yebo 6% Akunjalo -
Ukuhlungu obusemhlane Yebo 8.1% Yebo 12.8%
Khwehlela Yebo 8.2% Yebo 12.1%
Imfiva Yebo 10.3% Akunjalo -
Isicanucanu Yebo 6.5% Akunjalo -
Ukuhlanza Yebo 6.5% Akunjalo -
Umthombo: DailyMed ( Levemir ), IDailyMed ( I-Lantus )
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kweLevemir vs. Lantus
Imithi ethile ingakhuphula ubungozi boshukela wegazi ophansi uma ithathwa neLevemir noma iLantus. Eminye imishanguzo ingaphazamisa umphumela wokwehlisa ushukela wegazi weLevemir noma iLantus. Uma le mithi inikezwa ndawonye, ​​umthamo ungadinga ukulungiswa, futhi ushukela wegazi kufanele ubhekwe kaningi.
Okunye ukuxhumana kwezidakamizwa kungenzeka. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu oluphelele lokuhlangana kwezidakamizwa.
Izidakamizwa Isigaba sezidakamizwa Levemir I-Lantus
Ama-Angiotensin receptor blockers (ama-ARB)
Imithi elwa nesifo sikashukela (ngomlomo njenge-metformin, noma ijojowe)
I-Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)
Ama-antibiotic e-Sulfonamide Izidakamizwa ezandisa ubungozi boshukela ophansi wegazi Yebo Yebo
Amahomoni wegilo Izidakamizwa ezinciphisa umphumela wokwehlisa ushukela wegazi weLevemir noma iLantus
ILithium Izidakamizwa ezandisa noma ezinciphisa umphumela wokwehlisa ushukela wegazi weLevemir noma iLantus
Hlanganisa kabusha Izidakamizwa ezingafihla izimpawu zikashukela wegazi ophansi Yebo Yebo
I-Rosiglitazone Abongile Yebo Yebo
Izexwayiso ze-Levemir neLantus
Ungayisebenzisi iLevemir noma iLantus lapho une-hypoglycemic.
Ungayisebenzisi i-Levemir noma i-Lantus uma ngabe uke waba ne-allergen yokusabela kuzithako.
Ungalokothi wabelane ngepeni (noma ngabe inaliti ishintshiwe), inaliti, noma isirinji nomunye umuntu. Ukwabelana ngempahla kwandisa ingozi yokudlulisa izifo.
Izinguquko kuhlobo lwe-insulin zingadala i-hypoglycemia (ushukela ophansi wegazi) noma i-hyperglycemia (ushukela ophakeme wegazi). Bheka eduze amazinga eglucose egazini nganoma yiziphi izinguquko kuhlobo lwe-insulin.
Ukuzuza kwesisindo kungenzeka nge-insulin therapy.
Ukuphendula kwesayithi lokujova kungenzeka. Lokhu kusabela kungafaka ukubomvu kwendawo, ubuhlungu, ukulunywa, isifuba nokuvuvukala.
Musa ukujova iLevemir noma iLantus ngemithambo (emthanjeni) noma ngepompo ye-insulin.
Ushukela wegazi ophansi umphumela ohlangothini ovame kakhulu we-insulin. Ushukela ophansi wegazi ungafika ngokuzumayo futhi ungaphazamisa ukugxila nokuphendula, okungathinta ukushayela. Ishukela eliphansi kakhulu legazi lingadala ukuquleka. Kungasongela ngisho nokuphila noma kubangele ukufa. Ungayisebenzisi iLevemir noma iLantus ngesikhathi sesiqephu se-hypoglycemic.
Ukuhlangana phakathi kwemikhiqizo ye-insulin kwenzeke, okungadala ushukela wegazi ophansi. Hlola kabili ilebula le-insulin ngaphambi komjovo ngamunye.
Ukungezwani okunamandla, okusongela impilo noma i-anaphylaxis kungenzeka. Uma kwenzeka ukusabela kwe-hypersensitivity, yeka ukusebenzisa i-Levemir noma i-Lantus bese ufuna ukwelashwa.
I-insulin ingadala amazinga aphansi e-potassium. Uma kungalashwa, kungavela izinkinga zenhliziyo noma ukufa.
Imithi yeTiazolidinedione ingadala ukugcinwa koketshezi, ikakhulukazi uma ithathwa nge-insulin. Lokhu kungadala noma kubhebhethekise ukwehluleka kwenhliziyo uma le nhlanganisela yemithi ithathwa ndawonye; qapha izimpawu zokwehluleka kwenhliziyo.
Imibuzo evame ukubuzwa mayelana neLevemir vs. Lantus
ILevemir iyi-insulin esebenza isikhathi eside ethuthukisa ukulawulwa kukashukela egazini kubantu abadala nasezinganeni ezinesifo sikashukela. Iqukethe i-insulin detemir yesithako.
ILantus iyi-insulin esebenza isikhathi eside equkethe isithako i-insulin glargine. ILantus ithuthukisa ukulawula ushukela egazini kubantu abadala nasezinganeni ezinesifo sikashukela.
Ngabe iLevemir neLantus bayefana?
Yomibili le mithi yimishanguzo esebenza isikhathi eside ejojowe ngaphansi kwesikhumba (ngaphansi kwesikhumba). Kodwa-ke, banokunye umehluko, okuchazwe ngenhla.
Ngabe iLevemir noma iLantus ingcono?
TO ukubuyekezwa kokuhlolwa kwemitholampilo uphethe ngokuthi uLevemir noLantus bayefana ngokuphepha nokusebenza ngempumelelo. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo anganquma ukuthi ngabe i-Levemir noma i-Lantus ingcono kuwe, ngokuya ngezimo zakho nezempilo yakho.
kungakanani i-vitamin d ongayithatha ngokushoda
Ngingayisebenzisa i-Levemir noma i-Lantus ngenkathi ngikhulelwe?
Tshela umhlinzeki wakho wezempilo uma ukhulelwe noma uhlela ukukhulelwa. Kukhona ingozi kumama nasenganeni uma isifo sikashukela singalawulwa kahle ngesikhathi sokukhulelwa. Levemir futhi I-Lantus awuzange uhlotshaniswe nokukhubazeka okuzalwe nakho, ukuphuma kwesisu, noma eminye imiphumela emibi kumama noma enganeni. Kodwa-ke, lezi zifundo bezincane futhi azifundanga abantu abaningi. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo uzonquma ukuthi uyayidinga yini i-insulin ngesikhathi ukhulelwe, futhi uma kunjalo, iyiphi i-insulin efaneleke kakhulu.
Ngingayisebenzisa i-Levemir noma i-Lantus ngotshwala?
Yize imininingwane yabakhiqizi bakaLevemir noLantus ingabhalisi ukuxhumana okuqondile kotshwala, abantu abathatha iLevemir noma iLantus kufanele gwema utshwala . Uma ushukela wegazi lakho ulawulwa kahle futhi ungenayo eminye imibandela, ungahle uthokozele utshwala ngokulinganisela. Kodwa-ke, utshwala obuningi bungadala ushukela wegazi ophansi, ongaba yingozi. Buza kumhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo mayelana nokuphuza utshwala ne-Levemir noma i-Lantus.
Iyiphi i-insulin engathatha indawo yeLantus?
IBasaglar Kwikpen neToujeo SoloStar zombili ziqukethe i-insulin glargine, njengeLantus. UToujeo uza ngomthamo ophakeme. Kungakhathalekile isithako, umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo kuphela onganquma ukuthi yimuphi umkhiqizo olungele wena. Uma unezinkinga ngeLantus, xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo mayelana nokunye.
Ngisiphi isikhathi esihle sosuku sokuthatha i-Levemir?
Uma uthatha i-Levemir kanye ngosuku, isikhathi esihle kakhulu ngesikhathi sokulala noma ngesidlo sakusihlwa. Uma uthatha iLevemir kabili ngosuku, isikhathi esihle sokuyithatha kuse ekuseni bese kuba ngamahora ayi-12 kamuva.
Iyiphi indawo engcono yokujova iLevemir?
Jova i-Levemir ngomgogodla (ngaphansi kwesikhumba) kwenye yezindawo zokujova ezilandelayo: ithanga, ingalo engaphezulu, noma isisu. Sebenzisa inaliti entsha ngomjovo ngamunye.
Kungani iLevemir ibiza kangaka?
I-insulin, njengeLevemir, iyabiza. I-insulin ihlukaniswa njenge- i-biologic , eyi-molecule eyinkimbinkimbi eyenziwe ngamangqamuzana aphilayo. Eminye imikhiqizo ye-insulin iyathandwa futhi ibiza kancane kuhlelo lwakho. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo anganquma ukuthi ikhona yini enye indlela efanelekile ongayisebenzisela yona.
Izinto eziyi-13 ezibalulekile zokupakisha ekitishi losizo lokuqala lekolishi
Izinsiza zokuzwa ezihamba phambili ezi-5: Umhlahlandlela Wakho Wokugcina Wokuthenga
izimpawu zokuqala zesifo sikashukela kubantu abadala
Izoloft ibiza malini ku-walmart
indlela yokushaya umfutho wegazi ophezulu ngokwemvelo
uyini umehluko phakathi kobhejane ne-flonase
umkhuhlane uyathathelana isikhathi esingakanani ngemuva kokuqala i-tamiflu